TPLF Fi Liyyuu Poolisiin Oromo Irrati - Caboowanci.com-Oromia
TPLF Fi Liyyuu Poolisiin Oromo Irrati
December 29, 2016 Nadhani	2 Comments #OromoRevolution, OLF, OMN, OromoTV
Mootumman Wayyanee TPLF fi Liyyuu Poolisiin Oromo irrati duula cimaa fi ajjeechaa irran gahaa jiru. Gochii kun wagaa afur irraa kaasee haala jabaadhaan ilmaan Oromoo qe´ee isaanii irraa ariyyamaa fi ajjeefamaa jiru. Gochi kun gara mootummaa nannoo Oromiatin tohatamuu dhabuun isaa Ummata Oromootif kabaja dhabuu illee akka ta´ee beekamuu qaba.
Mootummaan wayyanee ilmaan Oromo lakkoofissa keessa galichuu eerga dhiifitee ture jira. Wayyaneen karaa harka lafa jaalaatiinis ta´ee karaa ifaatinis Oromo kana ajjeesuufi qabeenyaa isaa irra haxaa´uu erga jalqabidee enyuuyyu ni beeka. Wayyaanonni karaa biraa Oromo irrati duuluun kun amma tokko itti ulifaachuun isaa waan hin olleefi nati fakkaata bajata guddaa ramaddee Solamalee Liyyuu Poolisii kan jedhuu uumuu dhaan nannoo Oromia keessumaayyuu Baha Harargee keessati ajjeechaan jabaa raawwatamaa jira Poolisoota Sumaalee kanaan.
Wagaa arfan kana irraa kaassee bulichiinsii naannoo Somalia gochaa ajjeechaa ilimaan Oromo irraan gahuufii saamicha lafa Oromo akkasumas Beeladootaafi qabeenya Oromo Liyyuu Poolisii kanaan ajjeechisiisaafi saamisiisaa ture kana kan bira dhaabatee fi deegara guddaa gochaafi ture moottummaa wayyaanee waan ta´eef, gumaachaa kana moo dirqama mootummaan naannoo sumalee wayyaanota tplf dhaaf firootummaa isaanii agarisiisuuf jecha ykn walitti aantummaa isaanii cimisachuuf jecha gaafa ilmaan Tigre Godar Walqaayiti irraa godaani´anii Sudan galaniifi gargaarsa maalaqaa milliyyona hedduutti lakka´aamuu gochuun isaanii ni beekama.
Kanumaan wal qabatee hariroon moottummaa nannoo Somalee – Prezidaantii nannoo kana Abdi Illey wajjiniifi TPLF cimachuu fi michuumina irraan kan ka´ee sodaa tokko malee daanga Oromia cabisanii seenuudhaan ajjeechaa gara jabinaan ilmaan Oromo irraan gahaa jiru.
Dhimma kana irrati bulichitoonni nannoo Oromia gaafa gaafatamanii deebisanii rakkoon kun kan jiru Oromoodhuma kan afaan sumalee dubbatu malee sumalee miti jechuun dubbii kana laafeessafii sodaa gooftolii isaanii jalaa bahuuf jechaa ammas irra deebi´anii Oromo ficcisiisaa jiru. Garuu hardhas ta´ee borus OPDOn mirga Oromo eegidees hin beekituu burus akkasuma. Oromo kana keessayyis alaayyis diina isaa erga dhoowwuu dadhabanii diina isaa jiraachisuu irrati jirujechaadha. Erga diina Oromo kana eeguu ykn dhoowwu dadhabanii dhaaba maqaa Oromootin socha´uu qabachuun maaf barbachisee? Jedhanii gaafa tokko illee of gaafatanii hin beekan. Ammas badii irrati badiin jabaachaa deema. Dhuguma ebbii Oromoon ittin wal ebbisuu kun qoratamuu qaba. Tokkummaa Otuu jedhamuu garaagarummaan, afaan tokko otuu jedhamuu afaan walii hin galee, diina irrati otuu jedhamuu dhiiga ofii irrati. Mee ofi ofii keenya of haa ilaallu!
← Moottumman Wayyaneen Egypt Himmatte
Oromia Keessati Meles Park maal godhaa →
2 thoughts on “TPLF Fi Liyyuu Poolisiin Oromo Irrati”
diclofenac order shopping uk
purchase loratadine medicamento